ဒိုမိန်းရပ်နားခြင်းသည်အကျိုးရှိပါသလား။ | Martech Zone
တနင်္ဂနွေ, ဇန်နဝါရီလ 28, 2007 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
Domain ကားရပ်ရန်ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ သင့်မှာ domain name အတွက်အကြံဥာဏ်ကောင်းတစ်ခုရှိရင်၊ ဝယ်လိုက်ပြီလားဆိုတာကိုစစ်ဆေးပါ။ မဟုတ်ဘူး ... ဒါဆိုသင်ဝယ်မယ် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုအတွက်ဒိုမိန်းကိုအသုံးချမည့်အစား၊ Domain ကားရပ်နားခြင်းသည်ထပ်ဆောင်း ၀ င်ငွေရစေသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအချို့သောဒိုမိန်းအမည်များပိုင်ရှင်များသည်သန်းပေါင်းများစွာသောသူများကိုပြုလုပ်ကြသည်။ ဒိုမိန်းရပ်နားရန်နေရာအတွက်ငွေရှာနည်းနှစ်နည်းရှိသည်။
ပြည်သူ့တစ်ခါတစ်ရံတွင်တစ် ဦး ရိုက်ထည့်ပါ URL ကို ရှာဖွေတာထက် သင့်တွင်ဒိုမိန်းအမည်ရှိပါကသက်ဆိုင်ရာကြော်ငြာများကိုဆင်းသက်နိုင်သည့်စာမျက်နှာတွင်တင်နိုင်သည်။ အကယ်၍ ရှေးရှေးကကြော်ငြာကိုနှိပ်လိုက်ရင်၊ ကြော်ငြာရှင်ကသင့်ကိုပေးလိမ့်မယ်။
ယနေ့ငါဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်နေစဉ်, ငါပြန်လည်အစီရင်ခံရန်လိုအပ်ကြောင်းဤစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏စမ်းသပ်မှုအကြောင်းကိုငါ့ကိုသတိပေးခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ကျော်က Domain Parking အရင်းအမြစ်များကိုကမ်းလှမ်းသော Business 2.0 မဂ္ဂဇင်းရှိဝက်ဘ်ဆိုက်အချို့အကြောင်းဖတ်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှာ, Sedo အဘယ်သူမျှမရှေ့ပြေးစွဲချက်ခဲ့ကြောင်းဒိုမိန်းယာဉ်ရပ်နားကုမ္ပဏီများမှတ ဦး ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါကဓာတ်ပုံရိုက်မယ်လို့ငါဘလော့ဂ်ပို့စ်တင်ခဲ့သည်။
ငါအကောင်းဆုံးကံမကောင်းခဲ့တဲ့ဒိုမိန်းအမည်ကတော့ navyvets.com။ ဒိုမိန်းရပ်ပြီးတစ်နှစ်အကြာမှာဒေါ်လာ ၂.၅၀၀ ရောင်းဈေးနဲ့ကမ်းလှမ်းမှုမရှိဘဲဒေါ်လာ ၁.၂၂ ရခဲ့ပြီး ၉၃ ခုရခဲ့တယ်။ ဒိုမိန်းသက်တမ်းတိုးတိုင်းအတွက်တစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ ၁၄.၉၅ ပေးရပြီးပြီ။
ဒါကကျွန်မရဲ့အကောင်းဆုံးဖျော်ဖြေရေး link ကိုဖြစ်ခဲ့သည်။
ဟုတ်ပါတယ်ဒီအမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်အောင်နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ထောင်နှင့်ချီသောဒိုမိန်းအမည်များကိုမှတ်ပုံတင်သူနှင့်အတူရပ်ထားလျှင်၊ ကျွန်ုပ်သည်စျေးနှုန်းနိမ့်သောကမ်းလှမ်းမှုများကိုခံယူလျှင်ကျွန်ုပ်သည်ကြော်ငြာကိုစီမံခန့်ခွဲသည်။ အချို့သောအမူအကျင့်ဆိုင်ရာကြော်ငြာများကိုဆိုဒ်များတွင်ထည့်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည် - ကျွန်ုပ်အမြတ်အစွန်းရနိုင်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်နာမည်တစ်ခုစီအတွက်တစ်နှစ်လျှင်ဒေါ်လာတစ်လုံးလုပ်လျှင်ကျွန်ုပ်သည်နာမည် ၁၀၀,၀၀၀ ၀ ယ ်၍ ဝင်ငွေကောင်းကောင်းရနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါအဲဒီလိုလုပ်ဖို့အချိန်မရှိဘူး။ အကောင်းဆုံးအမည်များကို ၀ ယ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားသောဒိုမိန်းများကိုစောင့်ဆိုင်းရန်သို့မဟုတ်ငွေအမြောက်အများရှိသည့်အခြားသူများကို ၀ ယ်ရန်ကြိုးစားရန်အချိန်များစွာကြာလိမ့်မည်။
ဒါကြောင့်ငါ့ဒိုမိန်းယာဉ်ရပ်နားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနီးပါးကျော်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးရိုက်ချက်မှာကျွန်ုပ်၏အကောင်းဆုံးဒိုမိန်းကို Sedo တွင်ဒေါ်လာ ၃၉ ဖြင့်ဝယ်ပြီးကျွန်ုပ်သည် ၀ ယ်သူကိုရှာနိုင်မည်လားဆိုတာသိရန်ရှေ့စာမျက်နှာတွင်ရှိသည်။ ကျန်တဲ့ကျန်တဲ့ domains တွေကိုဒီဘလော့ဂ်ကိုညွှန်ပြပါလိမ့်မယ်။ ဒါက Sedo ထက်သူ့ရဲ့ကြော်ငြာတွေမှာကလစ်နှိပ်နှုန်းကပိုကောင်းတယ်။ EPC) ။ ငါကဘယ်လိုသွားသည်ကိုသင်သိပါစေ!
5:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 3, 23
တကယ့်ပြဿနာအချို့ကို သင်ထောက်ပြပြီးပါပြီ။ ဒိုမိန်းပါကင်” လက်ရှိရှိနေသည့်အတိုင်း သင့်တွင် အသွားအလာများသော ဒိုမိန်းအနည်းငယ် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့အတွက် ပေးဆောင်ခြင်းထက် အနည်းငယ်သာလွန်သော ဒိုမိန်းအများအပြားရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ကျွန်ုပ်၏ဒိုမိန်းအချို့သည် ၎င်းတို့တွင် အကြောင်းအရာနှင့် AdSense ကြော်ငြာများဖြင့် ၎င်းတို့လုပ်ဆောင်သည်ထက် ပုံမှန်ရပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
27:2007 pm မှာနိုဝင်ဘာ 8, 37
Domain Parking သည် အလုပ်မဖြစ်ပါ၊ သင့်တွင်ကြိုးစားရန် 100+ 200+ domain ကောင်းကောင်းမရှိပါက အချိန်ဖြုန်းပါ၊ domain အနည်းငယ်ကို စာရင်းသွင်းပြီး အမြတ်အစွန်းရလိုသည်မှာ အိပ်မက်တစ်ခုပါ၊ အချိန်မဖြုန်းပါနှင့်။
မေလ 8, 2008 မှာ 3: 51 pm တွင်
ဒိုမိန်းအမည်တစ်ခုသည် reg အခကြေးငွေထက် ဝင်ငွေပိုရနေပါက ၎င်းကို ရပ်နားထားရသည်မှာ သေချာပါသည်။ ဤဒိုမိန်းအမျိုးအစား 100 ကိုရှာပြီး ဝင်ငွေကောင်းနိုင်သည်။
မေလ 12, 2008 မှာ 4: 38 AM
Domain Parking ကုမ္ပဏီများကို သင်အသုံးပြုပါက ၎င်းတို့သည် သင့်ဝင်ငွေ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ရယူနေပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် သင့်ကိုယ်ပိုင် ဒိုမိန်းပါကင် script ကို လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးမည်ဆိုပါက (ထိုအရာမှ ရရှိနိုင်သည်။ http://www.domainzaar.com ) သင်သည် သင်၏ ကြော်ငြာဝင်ငွေ၏ 100% ကို သိမ်းထားပါသည်... ထို့အပြင် ၎င်းတို့သည် အခမဲ့ .COM DOMAIN NAME နှင့် 2008 ခုနှစ် မေလကုန်အထိ အခမဲ့ သက်တမ်းကုန်နေသော DOMAIN ရှာဖွေရေးဆော့ဖ်ဝဲကို မြှင့်တင်ပေးနေသည်။ စစ်ဆေးကြည့်ပါ။ http://www.domainzaar.com
22:2008 pm တွင်ဇူလိုင်လ 10, 01
domainzaar အကြောင်း ဤနေရာတွင် မှတ်ချက်ပေးခြင်းကို မခံနိုင်ပါ။
အိုအချစ်ရေ။ ဘာပိုက်ဆံဖြုန်းတီးလဲ။ အတိအကျပြောရရင် ငါ့ပိုက်ဆံ၊ ငါ့ဒေါ်လာ ၁၀၀။
Thomas – ဒါမှမဟုတ် သူ့နာမည်က ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် – ကျွန်တော် ပိုက်ဆံပေးဖို့ ကြိုးစားနေချိန်မှာ အီးမေးလ်တွေ ဖလှယ်ရာမှာ အရမ်းအထောက်အကူဖြစ်ခဲ့တယ် ဒါပေမယ့် ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြီးတာနဲ့ … ဟယ်လို အိမ်မှာနေတဲ့ တစ်ယောက်ယောက်ကို ??? အီးမေးလ်များစွာသည် တိုက်ရိုက်နှင့် ၎င်းတို့၏ ဝဘ်ဆိုက် ဆက်သွယ်မှုဖောင်မှတဆင့် ပေးသည်။ ဘာမှ! အကြောင်းမပြန်ပါ။
ဒီ script က $100 ဖြုန်းတာ ဘာမှလည်း မဟုတ်ပါဘူး။
အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်နိုင်သော အခမဲ့ script များရှိပါသည်။
domainzaar သို့ပို့ပြီး သင်ရခဲသောငွေကို မဖြုန်းတီးပါနှင့်။
10:2008 pm တွင်ဇူလိုင်လ 10, 35
မနှစ်က domainzaar ကနေ ဝယ်ခဲ့တာ၊ အကြီးမားဆုံးအမှား။
ကျွန်ုပ်တွင် သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော ဒိုမိန်းအမည် (bas3.com) ရှိပြီး ၎င်းတွင် domainzaar ဆော့ဖ်ဝဲကို ထည့်သွင်းပြီး နောက်အပတ်တွင် တစ်စုံတစ်ဦးသည် ကျွန်ုပ်၏ DNS ကို ပြန်ပေးဆွဲပြီး ၎င်း၏ဝဘ်ဆိုက်သို့ ညွှန်ပြနေပါသည်။ DZ သည် ဝင်သုံးနိုင်သော စာသားဖိုင်တွင် အက်မင်စကားဝှက်ကို plaintext ဖြင့် သိမ်းဆည်းထားသည်။
ဒါကို ပြင်ပေးဖို့ ပရိုဂရမ်မာကို တောင်းဆိုခဲ့တယ်၊ ၂ လလောက် စောင့်ပြီးမှ လွှတ်ချလိုက်ပါ။
ယခု ကျွန်ုပ်သည် ဒိုမိန်းရပ်နားခြင်းအတွက် လက်ခံဖြေရှင်းချက်တစ်ခုရရှိရန် လုပ်ဆောင်နေပါသည်၊ တစ်မိနစ်အတွင်း သော့ချက်စာလုံးအခြေခံသည့် စာမျက်နှာ5စာမျက်နှာကို လျင်မြန်စွာအသုံးချနိုင်သည်၊ ၎င်းအတွက် အခကြေးငွေယူနည်းကို စဉ်းစားနေပါသည်၊ ထိပ်ဆုံးမှ % ကိုယူသင့်ပါသလား။ အကန့်အသတ်ရှိသော ဒိုမိန်းများအတွက် တစ်နှစ်စာ အခကြေးငွေ ရှိသင့်ပါသလား။ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်သော ထုတ်ကုန်အဖြစ် ခွင့်ပြုသင့်ပါသလား။
ဒါတွေက ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်မေးရမယ့် အရာတွေပဲ၊ coder က webapps aPI ရဲ့ net မှာ ရနိုင်တဲ့ webapps တွေနဲ့ ရင်းနှီးလာတယ်၊ အဲဒါကို ဒီဇိုင်းလုပ်ပြီး ဈေးကွက်တင်ဖို့ပဲ လိုတယ်။
31:2008 pm တွင်ဇူလိုင်လ 8, 26
Domain Zaar သည် အတုအယောင်၊ အလိမ်အညာဖြစ်ပြီး ထုတ်ကုန်ဝယ်ရန် စဉ်းစားနေသူတိုင်းအတွက် အမှားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆော့ဖ်ဝဲသည် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း အလုပ်မလုပ်ဘဲ ပံ့ပိုးမှုလည်း မရှိပါ။ $99 နဲ့ခွဲခွာဖို့ စိတ်မ၀င်စားဘူးဆိုရင်တော့ ဆက်ပြီးလုပ်လိုက်ပါ… မင်းရဲ့ထုတ်ကုန်က ကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်တော့ဘဲ Zaar Scam man ဆီက ဘာကိုမှ ထပ်မကြားရတော့ပါဘူး။ ရိုက်စားမြို့။
စက်တင်ဘာ 13, 2008 မှာ 7: 00 AM
အားလုံးမမှန်ပါ။ fabulous.com နှင့် hitfarm.com ကို စမ်းကြည့်ပါ – ၎င်းတို့၏ ပရီမီယံ ပရိုဂရမ်များကို ရယူရန် လိုအပ်ပါသည်။ လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်က စတင်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ တစ်လလျှင် ၁၂၀၀၀/လ စုစုပေါင်း ၂၃၀၀၀ ဖြင့် အိမ်ပြန်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။
ဒီဇင်ဘာ 16, 2008 မှာ 6: 08 AM
Domain parking သည် ၎င်းတို့၏ domain name များအတွက် အလိုအလျောက် မိုက်ခရိုဆိုက်များ ပြုလုပ်ရန် ပျင်းနေသူများအတွက် ဖြစ်သည်။ ဒိုမိန်းရပ်နားခြင်း၏ အားနည်းချက်မှာ သင့်အလားအလာ၏ 30% သာ ရရှိပြီး သင့်ဒိုမိန်းများအတွက် အသက်အချက်ကို မတည်ဆောက်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
Douglas၊ ဒီဆွေးနွေးမှုအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စိတ်မ၀င်စားပါက၊ သင်၏ မှတ်ပုံတင်အရာရှိကို ပြောင်းပါ။ သက်တမ်းတိုးရန်အတွက် ကျွန်ုပ်သည် $8 မှ $9 ထက်ပို၍ ဘယ်သောအခါမှ မပေးချေပါ။ $14.95 က အရမ်းမြင့်လွန်းတယ်!!! domain name တစ်ခုစီတွင် $6 ကို အလွယ်တကူ ချွေတာနိုင်သည်။ ဒိုမိန်းတစ်ခုအတွက် ပဲလို့ထင်ရပေမယ့် ဒိုမိန်းအမည် 100 သို့မဟုတ် 1000 ရရှိပါက အမြန်တွက်ချက်ပေးပါ... domainers အများအပြားသည် ၎င်းတို့၏စျေးကြီးသော မှတ်ပုံတင်အရာရှိထံ ကားအသစ်များနှင့် ဇိမ်ခံအားလပ်ရက်များကို ပစ်ချနေကြသည် 🙁
ဇန်နဝါရီလ 28 ရက် 2009 ခုနှစ် ညနေ4နာရီ 36 မိနစ်
ဤသည်မှာ ဒိုမိန်းလုပ်ခြင်းနှင့် ဒိုမိန်းရပ်နားခြင်းဆိုင်ရာ ရယ်စရာအကောင်းဆုံး ဘလော့ဂ်ပို့စ်ဖြစ်သည် အချိန်အတော်ကြာ ငါဖတ်ဖူးသည်။ Domain ပါကင်မှာ အမှားအယွင်းတွေရှိပြီး တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် တောက်ပြောင်လာပေမယ့် တကယ်ကောင်းတဲ့ ယေဘူယျ ဒိုမိန်းအမည်တွေက သူတို့ရဲ့ပိုင်ရှင်တွေကို ပိုက်ဆံကောင်းကောင်းရအောင် လုပ်နေတုန်းပါပဲ (အဲဒါက ဒိုမိန်းအမည် 100,000 မှာ မင်းရဲ့မိုက်မဲတဲ့ ဥပမာနဲ့ မတူဘဲ တစ်နေ့ကို ဒေါ်လာရာနဲ့ထောင်ချီ၊ သက်တမ်းတိုးခအတွက် ထည့်တွက်ပါက ကြီးမားသော ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။) ဒိုမိန်းရေပြင်တွင် အမှန်တကယ် ဒိုမိန်းအမည်များဖြင့် ဆော့ကစားခြင်းအပေါ် သင့်ထင်မြင်ယူဆချက်အပေါ် အခြေခံ၍ အမှန်တကယ် domainer သည် ပန်းခြံမပြောနဲ့ ပိုင်ဆိုင်ရန် ဘယ်တော့မှ အနှောက်အယှက်ပေးမည်မဟုတ်သည့် အမှားတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင့်အား မည်သည့် domainer မှ ပြောပြမည်ဆိုပါက၊ ၎င်းကို ဖန်တီးခြင်းဖြင့် သင့်ဒိုမိန်းကို ငွေရှာခြင်းနှင့်/သို့မဟုတ် လှန်ပစ်ရန် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ ရပ်ထားစဉ်တွင် အချို့သော ယေဘုယျ ဒိုမိန်းအမည်များသာ ကောင်းမွန်ပြီး navyvets.com သည် ၎င်းတို့ထဲမှ တစ်ခုမဟုတ်ပေ။ ပန်းသီးကို ဘရိုကိုလီနဲ့ နှိုင်းယှဉ်တာထက် ပန်းသီးနဲ့ ပန်းသီးနဲ့ နှိုင်းယှဉ်တာက ပိုကောင်းပါတယ်။ ပြောရုံပါပဲ
ဇန်နဝါရီလ 28 ရက် 2009 ခုနှစ် ညနေ7နာရီ 40 မိနစ်
ဝိုး - 'ရယ်စရာကောင်းတဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ်' အတွက် ဆုနဲ့ထိုက်တန်တယ်ဆိုတာ မသေချာပါဘူး။ ငါမင်းကိုသဘောတူတယ်။ အဲဒါက ငါ့အတွက်မဟုတ်ဘူးလို့ပဲ ပြောပြီး ထောက်ခံစာတချို့ ပေးခဲ့တယ်။ အခြားလူများက ၎င်းသည် အမြတ်အစွန်းရသော လုပ်ငန်းတစ်ခုဟု ထင်ကောင်းထင်နိုင်သည်… ကျွန်ုပ်မဟုတ်ပါ။
ဇွန်လ 27 ရက် 2009 ခုနှစ် နံနက်6နာရီ 03 မိနစ်
Domain name Parking Concept Helped I am visited the Sedo ..Site for the Domain name pARKING details .It's good .U can also BuyaDomain name in the siteTucktai.comBulk Registration ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ၎င်းကိုရောင်းချပါ။ Domain name Parking အတွက် Site တစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်သည် & seller သည် site ၏ Reseller လည်းဖြစ်နိုင်သည်။